မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: နင်ဘယ်သူလဲ ..ငါဘယ်သူလဲ..
တက်ဂိမ်းထဲကမထွက်နိုင်သေးဘူးလေခင်မင်သူတွေများလို့ပဲလို့ဖြေပါတယ် (ထင်ရတာကိုပြောတာနော် :P )အာတာလွတ်မြို့စားကြီးဝင်စားသလားတော့ မသိပါဘူး။ 25ပြားစေ့ပုံ မျက်နှာပိုင်ရှင်(သူကိုယ်တိုင်ပြောသည်) ကဒေါင်းကထပ်တက်လာတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်သူလဲပြောရမတဲ့ပြောပြန်ရင် ယုံကြမှာလဲဟုတ်ပဲနဲ့ ခက်ပါတယ်လေ ပုံပဲပြတော့မယ်(ချက်ချာကြီး အဟိ)ကဲ ဒီမှာကြည့်ကြ အဲဒါ နာ့ပုံကွယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ(မြင်ဖူးတဲ့သူတွေ ကွန့်မန့် မရေးကြေး) ပုံပန်းသဏ္ဌာန်တော့ ပြောပြီးပြီ။အမူအကျင့်ကလဲ ဒီမှာရေးထားပီးသားပဲ ဖတ်လိုက်နော်။လာထား စိတ်နေစိတ်ထားလေးသဘောကောင်း အပြောချို ပညာတတ် ရုပ်ချော ဥစ္စာတော့ မပေါ အဟဲဟဲဖြစ်ချင်တဲ့ အရည်အချင်းလေးကတော့အမရာ၊ ကိန္နရီ၊ မဒီ၊ သမ္ဘူလ တို့လို ကိုယ်အပါအ၀င် တော်ငါးဝ ၀င်ချင်တာပါ။တော်သင့်ပြီထင်တယ်နော်။ ကြာရင် ချောင်းရိုက်ခံထိမှာစိုးလို့။အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ။ ပျော်တတ်လို့ပါဗျို။
မြင်ဖူးသူတွေ ကွန်မန့်မရေးကြေးဆိုလို ၀င်ရေးတာ ...ဘယ်သူ မယုံယုံ ကျွန်တော်ကတော့ ယုံလိုက်ပါမယ် ...အမစိတ်ချမ်းသာမှာ ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းမှာလေ ... အဟိ
မကြာခင် ပိုပိုအသက်ကြီးလာလို့ရင် တော်တော်လေး ၀ လာမှာပါ။ ပူနဲ့.
December 1, 2007 at 8:26 AM
မမီက အင်္ကျီလည်း ပါဘူး ချက်ချာကြီး ခွီခွီ ..
မမရေချောလိုက်တာ မမကိုပြောတာ ဟုတ်ဖူးနော် ပုံထဲကသူ့ကိုပြောတာ အလကားစတာပါ ငါ့အမကလှပြီးသား ကော်ကော်တိုက်နော်
December 1, 2007 at 1:40 PM
ဆေးမလှုပ်မိရင် နည်းနည်းထခုန်လိုက်။ :P
အစ်မကသူ့ထက်ပိုပါတယ်။ သူတို့ကမင်းသမီးလေ။ဘယ်သူကသူတို့အကြောင်းသေသေချာချာသိမှာလဲနော်။ အစ်မကပိုကောင်းပါတယ်။တကယ်ပြောတာပါ။ ဟဲဟဲ မုန့်ကျွေးတော့။ :P
December 3, 2007 at 12:29 AM
အဲလောက် တကယ် မိုက်ရင် မနက်ဖြန် အမေနဲ့ လာခဲ့မယ်နော်။ ဟတ်ဟတ်။
December 3, 2007 at 4:56 PM
blog seminar မှာမတွေ့ ထားဖူးဘူးဆိုတော့မော်မယ်မမကိုဒီပုံပါလို့ ယုံလိုက်တော့မယ်ဝေ့....အပြင်မှာတွေ့ ရင်ကော်ကော်တိုက်နော်...အမကပိုလှပါတယ်ဗျာ။ဒီဓာတ်ပုံကပိန်ပိန်ခြောက်ခြောက်ကြီး။မြန်မာပြည်ကမမတွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအလှဆုံးဝေ့။ဟားဟား
December 4, 2007 at 3:15 AM
blog seminar ဓါတ်ပုံတွေမှာတွေ့ဖူးတယ်။ သူ့ထက်ပိုလှပါတယ်။
December 8, 2007 at 2:21 PM
မောင်ပွတ်သို့ ကိန်းဂဏန်းများနှင့် တမ်းချင်း
Happy Birthday! Winkabar lay (on 25th November)
ကြင်နာသူအချစ်များဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ဆေးပေါင်းခတဲ့ ည
Happy Tazaung Daing!
ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်
Happy Birthday ပါ ဟိုလိုလူရေ
အမျိုးသား ကန်တော်ကြီး ဥယျာဉ်
အိတ်ထဲမှာ ဘာပါသလဲ ဆိုတော့
ကွန်ပျူတာ password ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်းကောင်းများ